AC Milan oo xalay Yurub ka dhigtay sheeko ay ugu dambaysay 24 sano kahor & Hakan Çalhanoglu oo u dabbaaldegey!! + Sawirro – Gool FM
Branislav Ivanovic oo dib ugu soo laabanaya Premier League… (Kooxdee ayuu xaqiijiyey inuu ku dhow yahay ku biiristeeda?)
Waa kuma xiddiga buuxin doona booska uu ka maqan yahay Sergio Ramos kulanka Real Madrid ay booqanayso Manchester City?
Kooxda AC Milan oo xaqiijisay inay Wadahadallo kula jirtay xiddiga Tottenham ee Serge Aurier… (Halkee ayay hadda mareysaa arrintaas?)
Kooxda Liverpool oo la xiriirtay Ismaila Sarr kaddib markii uu soo gabagabeeyey rikoorkoodii guuldarro la’aanta ee Premier League
Kooxaha Man United iyo Paris Saint-German oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid
“Real Madrid waxay heysataa fursad ka weyn tan ay ku soo bixi karto Manchester City”
Halyeey kooxda Real Madrid ah oo saadaaliyay natiijada kulanka la wada sugayo ee Barcelona iyo Napoli
Kulamada CAAWA laga ciyaarayo tartanka UEFA Europa League iyo saacadaha ay soo galayaan
RASMI: Kooxda Manchester City oo la saxiixatay xiddig cusub
Raage August 18, 2017
(Milano) 18 Agoosto 2017 – Hakan Çalhanoglu oo u dhashay Turkiga ayaa xalay ka mid ahaa laacibiintii wacdaraha ka dhigay kulankii ay AC Milan 6-0 uga badisay Shkendija.
Hakan Çalhanoglu ayaa boggiisa Instagram soo dhigay sawir muujinaya isaga iyo saaxiibkiisa ay sanadkan isla yimaadeen Milan ee André Silva oo wada dabbaal degaya isagoo raaciyay kabshan u akhrismaya: ”Waxaannu ku badinnay gurigeenna”.
RIKOODHADII XALAY – Markii ugu dambaysay ee ay Rossoneri hal ciyaar 6 gool Yurub ka dhaliso waxay ahayd Oktoobar 1993-kii oo ay xaaqday FC Copenhagen.
Riccardo Montolivo ayaa kusoo noqday jidkii gooldhalinta Milan, iyadoo laacibka Rossoneri markii ugu dambaysay gool uu dhaliyo ay ku beegnayd 13 Abriil 2014 markaasoo Montolivo uu ahaa dhaliyaha 1-0 ay ku badiyeen, taasoo ka dhigan inuusan gool dhalinin 1222 maalmood.
"Hal guul oo 4-0 ah nagama dhigayso kooxda ugu fiican ingiriiska" - Jose Mourinho